Thunderbolt 5 wuxuu gaari karaa xawaare dhan 80 GB ilbidhiqsi | Waxaan ka imid mac
Dhowr jeer ayaan eegnaa xawaaraha dekadaha USB A ama USB nooca C laakiin tani waa wax maanka lagu hayo haddii aan la shaqeyno faylal ka baxsan kombiyuutarradayada. Dareenkan, Apple wuxuu inta badan ku kala saaraa dekadaha qalabka kala duwan, hadba sida ay u xoog badan yihiin waxay leeyihiin dekado ka fiican kuwa aan awoodda badnayn oo macno ahaan xawaaraha wareejinta xogta aad bay u kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran dekedda. Hadda cusub Farsamada Thunderbolt 5 waxay gaari kartaa xawaare dhan 80 GB ilbidhiqsi kasta haddii aan fiiro gaar ah u yeelano sawir laga qaaday shaybaarrada Intel.
Dhammaan dekadaha USB isku mid ma aha
Waxaa jira noocyo badan oo dekadda USB ah, in kasta oo dadka isticmaala badankoodu ay isku mid yihiin. Xaaladdan waxaan ku leenahay kala duwanaansho la taaban karo oo u dhexeeya deked Thunderbolt iyo mid aan ahayn, tan laguma ogaan karo isha qaawan laakiin waxaa lagu dareemi doonaa xawaaraha kala iibsiga ama xitaa awoodiisa, iyada oo u gudbineysa astaanta muuqaalka kormeeraha xallinta sare ama ku dallacsiinta aaladda dhammaan dekaduhu ma sameeyaan xitaa haddii “gelintooda” ay isku mid tahay.
Maalinta 1 oo leh @intel Kooxda Israel ee buugaagta. Aragtiyo waaweyn… si aan caadi ahayn loo arko @GetThunderbolt hal -abuurnimo… dalxiis shaybaadh oo ansax ah iyo waqti lala joogo kooxda… ma sugi karo inaan arko waxa berri keenayo! pic.twitter.com/GKOddA6TNi
- Gregory M Bryant (@gurmood) August 1, 2021
Xaaladdan oo kale, sawir ku -xigeenka madaxa fulinta Intel iyo agaasimaha qaybta xisaabinta shaqsiyeed ayaa gaadhay shabakadda bulshada ee Twitter oo daaha ka qaadeysa mustaqbalka dekadahaan oo leh calaamad muujineysa “80G PHY Technology”, taas oo macnaheedu yahay imaanshaha xawaaraha wareejinta ee 80 GB ilbidhiqsi kasta. Maanta waxay ka dhigan tahay laba jeer xawaaraha farsamada Thunderbolt 4. Mac -yada ayaa tusaale cad u ah kala duwanaanshaha u dhexeeya dekadaha Thunderbolt iyo awoodooda iyadoo ku xiran heerka loo adeegsado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Thunderbolt 5 wuxuu gaari karaa xawaare dhan 80 GB ilbidhiqsi kasta